Mamwe maApple Watch Series 4 ane matambudziko ekutanga zvekare IPhone nhau
Chitsva cheApple chigadzirwa pane masherufu uye nhau nyowani nezve dzinogona kunge dzakapararira matambudziko muchikamu chikuru chavo. Isu tava kutaura nezvazvo Nhepfenyuro dzeApple 4, uyo ane stock iri kutodzikama muzvitoro uye zvakare, ane ongororo yaunogona kuona mune iyi link.
Nekudaro, zvinoita sekunge hazvisi zvese zvaizove nhau dzakanaka maererano neichangobva kuburitswa kubva kukambani yeCupertino vamwe vashandisi varikuzivisa kukanganisa kunokonzeresa yavo Apple Watch Seriesres 4 kutangazve kana vachiona rumwe ruzivo nezve mhedzisiro yezuva nezuva. Tsvaga kana uine Apple Watch Series 4 uye ugovana ruzivo rwako nesu.
Kanganiso iyi haisati yasimbiswa nekambani yeCupertino uye isu tine chokwadi chekutadza kwesoftware, saka hakuzove nekurangarira kana kutsiva chirongwa chechigadzirwa. Dambudziko iri rakaonekwa pekutanga muAustralia, uko vashandisi munyika vakatambura shanduko yenguva pfupi yapfuura, izvo zvaita kuomarara kwe basa pane imwe yemeso matsva ekurinda yakakonzera kutangazve kwechigadzirwa. Dambudziko iri rinogona kutakura richienda kune akawanda maApple Watch mayuniti muEurope kana shanduko yenguva yechando ichiitika - kunyangwe iyi ingave iri yekupedzisira nguva munhoroondo kuti zvinoitwa.
Kugadzirisa dambudziko, vashandisi vese vanofanirwa kuita kushandura wachi yewachi kuburikidza nechishandiso chakaiswa pane yedu iPhone uye inotevera inotevera restart wachi ichashanda nemazvo, zvisinei, vashandisi vazhinji vanogona kusazopedzisira voita kutsunga uku uye kupedzisa nekuenda kuApple technical kutsigira kuti dambudziko rigadziriswe. Pakupera kwemwedzi uno shanduko yenguva inosvika kuEurope, vachange vazvigadzirisa panguva iyoyo here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Mamwe maApple Watch Series 4 akatanga nyaya
Apple iri kuwedzera mirairo ye iPhone XR nekuda kwekutarisira kwakanyanya kutengesa